Suuqa 24-ka oo loo diiday oggolaanshaha ay ku dhisilahaayeen dhismaha suuqa -
Suuqa 24-ka oo loo diiday oggolaanshaha ay ku dhisilahaayeen dhismaha suuqa
Magaalada Minneapolis ayaa u diiday mulkiilaha iyo maamulka Suuqa 24-ka Cumar Sabri shatigii ama oggolaanshihii ay ku dhisilahaayeen dhismaha suuqa 24-ka.
Maalintii Isniinta ee ay bishu ahayd 01/23/2017 ayaa guddiga u qaabilsan magaalada Minneapolis codsiyadda la xiriira wixii dhismo ah ee la rabo in laga dhiso magaalada Minneapolis ay u diideen Cumbar Sabri oo ah ninka iska leh Suuqa 24-ka oggolaanshahii uu ku dhamaystiri lahaa dhisme uu bilaabay sannadkii hore.
Haddaba waxaa goobta kulankani ka dhacay xaadir ku ahaa dad weyne badan oo iyagu degen xaafada uu suuqu ku yaalo. Dadkan oo iyagu daris la ah Suuqa 24-ka ayaa ka codsaday guddiga ama shaqaalaha magaalada Minneapolis u qaabilsan codsiyadda la xiriira dhismaha, in aanan loo ogolaan mulkiilaha iyo maamulka Suuqa 24-ka in la siiyo oggolaansho ay ku dhisaan suuqaas.
Dadka dariska la ah Suuqa 24-ka ayaa ku andacooday in ammniga iyo nadaafada xaafadu aad u xumaatay, sababna ay u tahay dadka aadka u tiradda badan iyo baabuurta sida joogtada ah u soo booqda Suuqa 24-ka. Dadka xaafada degen ayaa ka cabanaya in dhismaha suuqu uu ku yar yahay dadka ka adeegta iyo waliba kuwa ku ganacsadda.
Suuqa 24-ka ayaa kamid ah ama ah suuqa labaad ee ugu weyn suuqyadda ay ku yaalaan ganacsiyadda ugu baddan ee ay leeyihiin Soomaalida ku dhaqan labadda magaalo ee mataanaha ah ee Minneapolis/St. Paul iyo waliba xaafadaha nawaaxigooda ah.
Xigashadda sawirka: Craig Lassig
Related Items:Business, Featured, Somali community, Somali immigrants, Somali Minneapolis